Cabdicasiis Axmed Ali | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Gorayadu badanaaba waxa eey Ku nooshahay meelaha banaan iyo dhulka geedaha gaagaaban. waxa eeyna dhashaa ukumo. inta eey ka dilaacayaan ukumahaas waqtina waxaa ku fadhiya Haldhaaga oo ah gorayada mideeda laboood halka tan kale eey soo daaqdo. marka kalana waxaa Ku fadhiya Hal-dhuraha oo ah tan dheddiga. Marka eey dilaacaana waxa eey kaga dhaqaaqaan meel bananaan oo aan amaan aheeyn. iyaga oo aanan Ku fikirin in eey Cid kale u soo daba mari karto oo eey qaadan karto ilmahooda. gorayada mar danbe oo eey xeero iyo fandhaal kala dhaceen ayeey ku baraarugtaa in iyada iyo ilmaheedii eey kala irdhoobeen …
Hadii aan si qoto dheer ugu fiirsano bulsho kasta oo dunidaan kunool waxa ey leedahay waxyaabo si gaar ah loogu tixgeliyo una ah dhaxal iyo soo jireen eey ka dhaxleen jiilkii iyaga ka horeeyay, hadaba bulshada Soomaaliyeed waa bulsho leh murti balaaran iyo hiddo qoto-dheer oo ey ka dhaxleen awoowyaashooda. Waxa aan ogsoonahay in Murtidu tahay waxa dadyooga dunida kunool madmadowga iyo halisahu kaga bixi karaan. Gumeysigu waxa uu ogaaday in aqoonta iyo murtida Soomaalidu leedahay iftiin jaheeya bulshada, sidaa awgeed waxa uu ladiriray aqoonta iyo murtida Soomaalida si uu unaafeeyo horumarka bulshada Soomaaliyeed. Waxa uu ku dadaalay xoojinta …
Xaawo luul waa innan 15 jir ah waxa eey Ku dhalatay kuna barbaartay waddan duruufo adag eey ka jiraan gaar ahaan dhanka caafimaadka, dadkuse kale roon oo duruufaha uma sina xaawo iyo qoyskeda waxa eey ka mid yihiin bulshada inteeda ugu tabarta daran. Xaawo waa xaas oo waxa eey u dhaxdaa Xasan, Xasan waa ma shaqeeyste oo maalintii oo idil waa uu hurdaa habeenkiina waa uu qayilaa waa sababta loogu naaneeyso Xasan xoolo. Qooyska waxa u dhaqdhaqaaqa xaawa luul. waaga marka uu cadaado waxa eey u amba baxdaa magaalada si eey u soo shaqeeyso waxa eey maalintii soo shaqeeysana …
Guurka waa unnuga iyo aasaaska ugu horeeyo ee qoyska, bulsha kasta oo ku nool degaan gaar ah waxa eey leeday xeer iyo caadooyin guur oo u gaar ah, kuwaas oo eey ka dhaxleen jiilkii iyaga ka horeeyay. Hadaba lbulshada soomaaliyeed waa bulsho leh hiddo iyo dhaqan u gaar ah . Sidaa darteed waxa eeynu ka hadli doonaa guurkii iyo hasaawahii soomaalida inaga oo tilmaami doona waagii hore siyaaabaha uu guurku ku imaanjiray iyo nooca hasaawe ee bulshadii hore. Inta badan guurka somaliada waxa uu ku imaanjiray shan siyaabood oo mid waliba ka koobanyahay labo qeeybood kuwaas oo eey iskugeeyntoodu …